काठमाडौं । कैलाश विकास बैंक र सिटिजन लाईफ इन्स्योरेन्सबीच बैंकास्योरेन्स सम्झौता भएको छ। सम्झौता अनुसार ग्राहकहरुले विकास बैंकका सम्पूर्ण शाखाबाट सिटिजन लाइफ इन्स्योरेन्सको जीवन बीमालेख प्राप्त गर्न, प्रिमियम भुक्तानी गर्न, दाबी..
काठमाडौं । एनएमबी बैंकले ७ प्रकारका प्रोडक्टमा विनाधितो ऋण दिने भएको छ । सरकारले हालै संचालनमा ल्याएको ‘सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदान सम्बन्धी एकिकृत कार्यविधि’ अनुसार बैंकले यस्तो प्रोडक्ट ल्याएको..
काठमाडौं । स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्थाले साढे १० करोड रुपैयाँको एफपिओ निष्काशन गर्ने भएको छ। लघुवित्तमा हाल कायम रहेको संस्थापक र सर्वसाधारणको पूँजी अनुपात ७०ः३० लाई परिवर्तन गरी ५१ः४९ कायम..
लक्ष्मी लघुवित्तको लाभांश पारित, अन्य लघुवित्तसँग मर्ज गर्ने नीति पारित
काठमाडौं । लक्ष्मी लघुवित्तको लाभांश पारित भएको छ । लक्ष्मी बैंकको सहायक कम्पनी लक्ष्मी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले गते आईतबार सातौ वार्षिक साधारण सभाले उक्त लाभांश पारित गरेको हो । सातौं..
काठमाडौँ । मेगा बैंक नेपाल लिमिटेडले इन्टरनेटमा कार्डमार्फत वस्तु तथा सेवा खरिद गर्न चाहने ग्राहकका लागि थ्रीडी सेक्योर प्रविधि सञ्चालनमा ल्याएको छ । भिसा कार्ड इन्टरनेशनलको ‘भेरिफाइड बाई भिसा’मा आधारित यो..
सिटिजन्स बैंकको का.मु. सीईओको जिम्मेवारीमा गणेशराज पोखरेल
काठमाडौं । गणेशराज पोखरेल सिटिजन्स बैंकको कायम मुकायम प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (एक्टिङ सीईओ) नियुक्त भएका छन् । यही पुस १६ गतेबाट कार्यकाल सकिन लागेका सीईओ राजनसिंह भण्डारी बिदामा बसेपछि पुस १..
नेपाल एसबिआई बैंकको १५.७९ प्रतिशत लाभांश घोषणा, ५ प्रतिशत बोनस शेयर
काठमाडौं । नेपाल एसबिआई बैंकले गत आर्थिक वर्षको नाफाबाट शेयरधनीलाई वितरण गर्ने लाभांश लाभांश घोषणा गरेको छ । बैंक सञ्चालक समतिको ४३२ औं बैठकले शेयरधनीलाई ५ प्रतिशत बोनस शेयर र १०।७९..
बनेपा। अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले सानो प्रयासबाट वित्तीय प्रणालीमा स्थायित्व आएको बताएका छन्। आज काभ्रेपलाञ्चोकको बनेपा नगरपालिका–१३ साँगामा महिला लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको कार्यालय उद्घाटन गर्दै उनले महिलाको वित्तीय पहुँचमा..
बैंक अफ काठमाण्डूले बोनश शेयर र नगद लाभांश दिने घोषणा
काठमाडौं । बैंक अफ काठमाण्डूले गत आर्थिक वर्षको नाफाबाट २५ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने भएको छ । बैंक सञ्चालक समितिको मंसिर २७ गते बसेको ९९ औं सञ्चालक समितिको बैंकले शेयरधनीलाई १४..
सिटिजन्स् बैंकको ५.२६ प्रतिशत लाभांश घोषणा
काठमाडौं । सिटिजन्स् बैंकले गत आर्थिक वर्षको नाफाबाट शेयरधनीलाई लाभांश प्रस्ताव गरेको छ। बैंक सञ्चालक समितिको मंसिर २५ गते मंगलबार बसेको २८२ औं बैंठकले बोनस र नगद गरि कूल ५.२६३ प्रतिशत..
काठमाडौं । एनआईसी एशिया बैंक लिमिटेडले आईएमई लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडसँग बैंकास्योरेन्स सम्झौता गरेको छ। उक्त सम्झौतापत्रमा बैंकको तर्फबाट बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रोशन कुमार न्यौपाने र इन्स्योरेन्स कम्पनीको तर्फबाट प्रमुख..
काठमाडौं । माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेडले ३ शाखा कार्यालयको औपचारिक शुरूवात गरेको छ । बैंकले मंसिर २१ गते मकवानपुरको हेटौडा उपमहानगरपालिकास्थित हेटौडा शाखा कार्यालय, चितवनको इच्छाकामना गाउँपालिकास्थित इच्छाकामना शाखा कार्यालय र चितवनकै..
काठमाण्डौ । ज्योति विकास बैंकले स्याङ्जाको वालिङ र पाल्पाको तानसेनमा नयाँ शाखा संचालनमा ल्याएको छ । तानसेन नगरपालिका वडा नं ४, तानसेन, पाल्पामा रहेको नयाँ शाखा तानसेन नगरपालिका मेयर अशोककुमार शाही..
नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैंकको ४० प्रतिशत लाभांश प्रस्ताव, बोनस शेयर कति
काठमाडौं । नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैंकले गत आर्थिक वर्षको कमाईबाट आफ्ना लगानीकर्तालाई बितरण गर्ने लाभांश प्रस्ताव गरेको छ । आइतबार बसेको बैंक सञ्चालक समितिको बैठकले आफ्ना शेयरधनीलाई दिने लाभांश प्रस्ताव गरेको..
काठमाडौं । सरकारको पछिल्लो निर्णयअनुसार वाणिज्य बैंकमा पठाएको ५० प्रतिशत अनुदानमध्ये साढे १७ अर्ब राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले मात्रै पाएको छ। गत सोमबार भएको निर्णयअनुसार सरकारले संघीय सरकारमा गएको बजेटमध्ये ५०..
वाणिज्य बैंक र टिच फर नेपाल बीच सम्झौता
काठमाडौं । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेड र टिच फर नेपाल बीच सामुदायिक विद्यालयका स्वयम सेवक शिक्षकहरुको व्यवस्थापनको लागि १० लाख रुपैंया आर्थिक सहयोग गर्ने सम्बन्धमा शुक्रवार सम्झौता भएको छ । सम्झौतापत्रमा..
माछापुच्छ्रे बैंकको ३ नयाँ शाखा एकैसाथ संचालनमा
काठमाडौं । माछापुच्छ्र बैंकले ३ शाखा कार्यालयको औपचारिक सुरुवात गरेको छ । बैंकले यही मंसिर २१ गते मकवानपुरको हेटौंडा उप–महानगरपालिका स्थित हेटौंडा शाखा कार्यालय, चितवनको इच्छाकामना गाउँपालिका स्थित इच्छाकामना शाखा कार्यालय..
सेञ्चुरी बैंकले मुद्दती खातामा १३ प्रतिशतसम्म ब्याज दिने
काठमाण्डौ । सेञ्चुरी कमर्सियल बैंकले व्यक्तिगत ग्राहकहरुलाई उच्च ब्याजदर सहितको मुद्दती निक्षेप योजना सञ्चालनमा ल्याएको छ । बैंकले ६ महिना देखि २ वर्ष सम्मको विशेष मुद्दती खाताको लागि वार्षिक ब्याजदर १३..
काठमाडौं । उद्योग वाणिज्य महासंघले बैंहरुबीच अस्वभाविक रुपमा व्याजदर वृद्धिको प्रतिस्पर्धा चलेको भन्दै सीमाभित्र राख्न सरकार र राष्ट्र बैंकलाई आग्रह गरेको छ। एक विज्ञप्ति जारी गर्दै महासंघले ब्याजदर बढाइँदा विगतमा भएको..
काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकले ब्याजदरमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा नगर्न वाणिज्य बैंकहरूलाई चेतावनी दिएका छन् । वाणिज्य बैंकहरूले धमाधम निक्षेपमा ब्याज बढाउन थालेपछि केन्द्र बैंकले बैंकहरूलाई सचेत गराउँदै..
सेञ्चुरी बैंक र सिटिजन लाइफबीच बैंकास्योरेन्स सम्झौता
काठमाण्डौ । सेञ्चुरी कमर्सियल बैंक लिमिटेड र सिटिजन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडबीच मंसिर २० गते बैंकास्योरेन्सको सम्झौता भएको छ । सम्झौता अनुसार ग्राहकहरुले सेञ्चुरी कमर्सियल बैंक लिमिटेडबाट उक्त कम्पनीको बिमा लेख..
कालिका लघुवित्तले गर्यो लाभांश प्रस्ताव
काठमाडौ । कालिका लघुवित्त ले गत आर्थिक वर्षको नाफाबाट शेयरधनीलाई १६.४२ प्रतिशत मात्र लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको हो । मंसिर १९ गते बुधबार ३ बजे बसेको लघुवित्तको १६२ औं सञ्चालक..
काठमाडौं । कुमारी बैंकले ‘एभरेष्ट प्रिमियर लिग – टि २० टुर्नामेन्ट’मा सहभागी टोली ‘चितवन टाइगर्स’लाई प्रायोजन गरेको छ। क्रिकेटको विकासमा सहयोग गर्न टोलीलाई सहयोग गरेको बैंकले जनाएको छ। टुर्नामेन्ट यहि मंसिर..
काठमाडौं । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेडको व्यवसाय बृद्धिका लागि रणनीति तय गर्न कर्जा लगानीको दृष्टिकोणले बढि कर्जा लगानी भएका ४८ शाखा कार्यालयका प्रवन्धकहरु सम्मिलित बिजनेस मिट–२०७५ चितवनको सौराहमा सम्पन्न भएको..
काठमाडौं । व्यक्तिगत निक्षेपमा लाग्दै आएको ब्याजदर सीमा अबदेखि नलाग्ने भएको छ ।नेपाल बैंकर्स सङ्घको आज बसेको बैठकले व्यक्तिगत निक्षेपमा लाग्दै आएको ब्याजदर सीमा हटाएर बैंकलाई नै स्वतन्त्ररूपमा निर्णय गर्न..
ग्लोबल आइएमई बैंकले शेयरधनीलाई बोनस शेयर दिने
काठमाडौं । ग्लोबल आइएमई बैंकले गत आर्थिक वर्षको नाफाबाट शेयरधनीलाई वितरण गर्ने लाभांश प्रस्ताव गरेको छ । मंसिर १८ गते मंगलबार बसेको बैंक सञ्चालक समितिको ३०७ औं बैंठकले आर्थिक वर्ष २०७४/७५..
नबिल बैंकले शेयरधनीलाई बोनस शेयर सहित ३४ प्रतिशत लाभांश दिने
काठमाडौं । नबिल बैंकले गत आर्थिक वर्षको नाफाबाट शेयरधनीलाई वितरण गर्ने लाभांश प्रस्ताव गरेको छ । बैंक सञ्चालक समितिको बैंठकले १२ प्रतिशत बोनस तथा २२ प्रतिशत नगद लाभांश गरि कूल ३४..
काठमाडौं। आजबाट स्थानीय तहलाई पठाएको बजेटको ५० प्रतिशत रकम सम्बन्धित बैंकले प्रयोग गर्न पाउँने भएका छन्। आजै राष्ट्र बैंकमा रहेको स्थानीय तहको खाताबाट सम्बन्धित बैंकमा पैसा गइसकेको छ। अहिले स्थानीय तहहरुको..
पुनर्बीमा कम्पनीसँग रिलायवल नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सको पुनर्बीमा सम्झौता
काठमाडौँ । नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी लिमिटेड र रिलायबल नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेडबीच नेपाल सरकारले चालु आव २०७५/०७६ को बजेट वक्तव्यबाट व्यवस्था गरे बमोजिम २०% प्रत्यक्ष हिस्सा पुनर्बीमा व्यवस्थाको लागि सम्झौता..
कुमारी बैंकले बोनस शेयर दिने, पूजि ८ अर्ब पुग्ने
काठमाडौं । कुमारी बैंकले आफ्ना शेयरधनीलाई बोनस वितरण गर्ने भएको छ। बैंकले आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को नाफाबाट शेयरधनीलाई १२.७५ प्रतिशत बोनस शेयर वितरण गर्ने भएको हो । बैंक सञ्चालक समितिको आइतबार..
Results 1896: You are at page 11 of 64